तिम्रो सरकारलाई "कासी"मा लगेर ब्यवस्थापन गर, यो हाम्रो मंगोल भुमीमा होईन - MONGOL KHABAR
तिम्रो सरकारलाई "कासी"मा लगेर ब्यवस्थापन गर, यो हाम्रो मंगोल भुमीमा होईन
बैशाख । मुलबासी मंगोलहरु आजससम्म प्रकाश बिनाको अन्धकारमा रहेछौ। बर्षौदेखि हामीलाई अन्धकारमा राख्न बाध्य बनाएका अनेकौं षड्यन्त्रको पोकाको झोलाहरु हामीसामु आज छर्लङ्गसंग तिमिले नै खोलिदियौ। हामी मुलबासी मंगोलहरुको अँखाको पट्टी सरल तरिकाले हटाई दियौ धन्यवाद तिमिलाई मेरो मनैदेखि।
हो सरकार तिम्रो नै हो। हिजो पनि तिम्रो नै थियो आज पनि तिम्रो नै छ। बिदेशबाट भित्रीएर हाम्रो सोझासाझा मंगोल पुर्खाहरुलाई एकीकरणको नाममा हत्या गरेर अनेकौं षड्यन्त्र रचेर हाम्रो २२ सय,२४ सय राज्यलाई आफ्नो हातमा लिएका छौ ? तेसैले मेरो सरकार भन्नु तिमिलाई स्वतन्त्र छ।
खोई नेपाली राजनीतिक इतिहासमा कहाँ लेखिएको छ हाम्रो सरकार भनेर सानो तहदेखी उच्च निकायसम्ममा तिम्रो मान्छेहरु नै छ्न नेपालको निति,नियम,कानुन लोकतन्त्र सबै तिम्रो नै त छ अहिलेसम्म क्या गजब लाग्यो तिम्रो भाषाण अनि अभिव्यक्ति। हत्याहिंसा,सुन कान्डा,बलात्कार घुस्खोरी,दलाल चेलीबेटी बेचबिखान जस्तो कार्यहरु तिम्रो सरकार हुँदा नै मौलाउदै आएका छ्न। हाम्रो मंगोल समुदाय माथी शोषण दमन गर्दैछ तिम्रो सरकारले? छुवाछूत भेदभाव कायम नै छ तिम्रो सरकारमा। जनतालाई मारेर नेता मोटाएको छ तिम्रो सरकारमा? अब धेरै समय छैन तिम्रो याद राख मर्न लागेको बुढी। धेरै नै नेपाली जनताले नपच्ने खाले कुकुरको बोलि फिरार्यौ ।
अब तिम्रो सरकारलाई "कासी"मा लगेर ब्यवस्थापन गर। यो हाम्रो मंगोल भुमीमा होईन। धेरै भुक्दै आयौ हाम्रो देशमा र हामीले पनि भुसिया कुकुर न हो भनेर पनि भुक्न दियौ तर अब भुक्न पाउदैन किनभने तिम्रो सरकार फालेर आफ्नो सरकार स्थापित गर्न मुलबासी मंगोल आउदै छ। सिहको रुप लिएर बेलामै बिचार पुर्यएर आफ्नो औकातमा बस
लेखक - ✍️Remix Jerry